लिभरपूल : यूरोपियन रेकर्ड २१ खेलबाट ६१ अंक !! - Experience Best News from Nepal
प्रिमिएर लिग खेल हेबी वेट टिम लिभरपूल विरुद्ध टोटनह्याम हट्सपरको खेलमा लिभरपूलले टोटनह्याम हट्सपर स्टेडियममा १-० को जित दर्ता गरेको छ । ८ औ स्थानमा रहेको टोटनह्यामसंग लिभरपूलले २२ औ चरणको खेल सामना गरेको हो । यस जितबाट लिभरपूलले २१ खेलबाट ६१ अंक बटुल्न सफल भएको छ ।
निकै दवाबपूर्ण खेलको पहिलो हाफमा विभिन्न गोलको सम्भावना पश्चात लिभरपूलले टोटनह्याम माथि फर्मिनोको गोलमा अग्रता लियो । ३७ औ मिनेटमा मो.सलाहको पासलाइ सदुपयोग गर्दै रोबर्ट फर्मिनोले लिभरपूलका निम्ति अग्रता दिलाएका हुन् । उक्त फर्मिनोको गोल नै निर्णायक गोल बन्न पुगेको थियो । दोश्रो हाफमा टोटनह्यामले निकै ठुला प्रयासहरु गोलमा परिणत गर्न सकेन साथै लिभरपूलले समेत कुनै गोल दोश्रो हाफमा थप्न सकेन ।
एक बर्षे प्रिमिएर लिग अपराजय यात्रा कायम राखेको लिभरपूलका निम्ति यस सिजन कुनै प्रिमिएर लिग खेल हारेको छैन साथै यूरोपियन टप लिगमा लिभरपूलले सर्वाधिक अंक बटुल्न सफल समेत भएको छ । लिभरपूलले यस जितसंगै प्रिमिएर लिगमा ६१ अंक बटुलेको छ भने टोटनह्यामले मात्र ३० अंक बटुल्न सफल भएको छ ।
यूरोपियन टप ५ लिगमा यो एक रेकर्ड हो जसमा २१ खेल खेलेको लिभरपूलले ६१ अंक बटुलेको हो ।
टोटेनहमलाई धक्का मुख्य फरवार्ड ह्यारी केन ४ महिना मैदान बाहिर !!